Dil ka dhacay B/weyne xilli Ugaaska beesha Xawaadle uu dhawaantaan arrinkaasi digniino kasoo saaray – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dil ka dhacay B/weyne xilli Ugaaska beesha Xawaadle uu dhawaantaan arrinkaasi digniino kasoo saaray
Wararka naga soo gaaraya magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay maanta halkaasi ka bilaabeen howlgalo aad u balaaran oo lagu baadi-goobayo kooxihii habeenkii xalay dilka u geystay nin ganacsade caan ah islamarmaana lagu dhaawacay wiil uu ganacsadahaasi dhalay.
Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgaladaan maanta ka wada dhamaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada B/weyne, waxaana inta badan wadooyinka magaalada lagu arkayaa ciidamo badan oo aad u hubeysan.
Saraakiisha ciidanka dowladda federaalka oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay in ciidankaasi ay weli ku raad-joogaan kooxihii ka dambeeyay falkii lagu dilay ganacsade lagu magacaabi jiray Daahir Mahad Alle, iyo dhaawacii loo geystay wiil uu dhalay ganacsadahaas.
Allaha u naxariistee marxuumka iyo wiilkiisa ayaa habeenkii xalay loo galay wadada xilli ay kusii jeedeen hoygooda, kadib markii ay kusoo dukadeen salaaddii cishaha masjid ku yaala Raadeerka ee magaalada B/weyne.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka deegaanka magaalada B/weyne ayaa sheegay in howlgaladaasi ay xoogoodi ka socdaan guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi, iyadoona weli aysan jirin cid ilaa iyo haatan lagu soo qab qabtay howlgaladaas.
Si kastaba ha ahaatee, dilka ganacsadahaan ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaantaan Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif uu bulshada gobolka Hiiraan kaga digay dilal qorsheysan oo halkaasi laga geysto, isagoona bulshada reer Hiiraan kula dardaarmay inay iska kaashadaan xaqiijinta nabadgelyada gobolkaas.